Tsy manaiky fitsaram-bahoaka ny zandarimariam-pirenena : tafakatra 16 ireo voasambotra noho ilay famonoana zandary tany Mananjary | NewsMada
Tsy manaiky fitsaram-bahoaka ny zandarimariam-pirenena : tafakatra 16 ireo voasambotra noho ilay famonoana zandary tany Mananjary
Nahitsy ny tenin’ny talen’ny angom-baovao eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Rakotoarison Anthony : “Tsy manaiky ny fanaovana fitsaram-bahoaka ny zandarimariam-pirenena”. Izany dia mifandraika indrindra tamin’ilay raharaha fitsaram-bahoaka nahafaty ny GP2C Fanambina Marcellin tany Namorona Mananjary…
« Miisa 16 hatreto ireo olona voasambotra tamin’ny famonoana zandary tany Namorona distrikan’i Mananjary. Misy ben’ny Tanàna sy Ampanjaka roa amin’ireo. Izy ireo no niantso sy nitaona ireo olona hanao fitsaram-bahoaka », hoy ny talen’ny angom-baovao eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Rakotoarison Anthony. Nohamafisiny hatrany fa tsy manaiky ny fanaovana fitsaram-bahoaka ny zandarimariam-pirenena. “Tsy fahatokisana ny rafi-pitsarana ny mahatonga ny fitsaram-bahoaka. Raha tsy votsotra eo amin’ny zandary, votsotra any amin’ny tribonaly. Raha migadra aza migadra kely nefa mivoaka indray satria nahazo fahafahana vonjimaika. Izany ny fomba famakian’ny olona, hany ka lasa tsy matoky ilay olona ary mahatonga ny fitsaram-bahoaka”, hoy hatrany izy.
Mbola hitohy ny fisamborana…
Voalaza fa mbola hitohy hatrany ny fisamborana na eo aza ny fahatrarana ireto olona voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ny GP2C Fanambina Marcellin ireto. Ny Ampanjaka Gaston Tsitoho sy ny Ampanjaka Iboba ireo Ampanjaka voasambotry ny zandary any an-toerana. Teo koa ny ben’ny Tanàna ao Namorona sy ny zanany. Samy nandà ny fiampangana azy avokoa ireto voasambotra ireto, araka ny fampitam-baovao avy any any Fianarantsoa. Hatolotra ny fampanoavana ao Fianarantsoa kosa izy ireo aorian’ny fahavitan’ny fanadihadiana momba ity raharaha fitsaram-bahoaka ity namoizana zandary ity. Maromaro ny olona efa voasambotra tany aloha, saingy efa navotsotra ny sasany amin’izy ireo taorian’ny famotorana. Tsy afaka kosa ny ben’ny Tanàna sy ny Ampanjaka roa lahy.
Taona 2016 : nahatratra 43 ireo zandary voasazy
Nitondra fanazavana manokana hatrany ny Jly Rakotoarison Anthony fa nahatratra 43 ireo zandary niharan’ny sazy sy nandraisana fepetra ka misy amin’izy ireo naiditra am-ponja. “Tsy miaro mihitsy izahay fa rehefa olona ratsy dia ratsy izy aminay. Ao anatin’ny fanadiovana anatiny izahay amin’izao”, hoy izy. Miisa 375 ny zandary manana antontan-taratasy sy nisy nanao fitoriana tamin’iny taon-dasa 2016 iny. Misy amin’izy ireo, afaka raha voatery naiditra am-ponja mihitsy ny sasany amin’izy ireo taorian’ny fanadihadiana rehetra.
Nantitranteriny fa ao anatin’ny ezaka aton’ny zandarimariam-pirenena ankoatra ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana ny ady amin’ny kolikoly. Tsy mandefitra mihitsy izahay amin’ny kolikoly eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa manenjika hatrany. Niteraka resabe rahateo ny kolikoly teo aloha teo mahavoasaringotra hatrany ny zandarimariam-pirenena ka niteraka laza ratsy ho azy ireo.
Miasa mafy ny Usad any atsimo…
Miasa mafy ny Vondron-kery manokana miady amin’ny dahalo (Usad) any amin’ny faritra atsimo. Teo anelanelan’ny fetin’ny Krismasy sy ny taom-baovao, indroa nihetsika ity vondron-kery ity amin’ny fampandriana fahalemana, raha ny fanazavan’ny Jly Rakotoarison Anthony. Voafetra ihany anefa ny toerana alehan’izy ireo satria tsy mbola ampy ny fitaovana eo am-pelatanana. Kamiaobe rahateo ny ampiasain’ny Usad any atsimo. Voalaza fa tafaverina amin’ny tompony avokoa ny omby rehetra nandritra ny hetsika manokana nataon’izy ireo.